Vivaldi 4.3 inovandudza iyo yekubata chishandiso uye yekurodha pani | Linux Vakapindwa muropa
Kune vazhinji, yakakosha poindi yakaipa yeiyi browser ndeyekuti haisi yakavhurika sosi. Iye aimbove CEO weOpera nechikwata chake vanoti icho ichokwadi, nekuti zvinopfuura makumi mapfumbamwe muzana ndizvo zvazviri, uye vanochengeta zvishoma izvo zvinovaita kuti vakoshese kupa zvinhu zvakaita semanotsi, tsamba yemutengi uye chinongedzo zvacho. . Asi zvinoonekwa ndezvekuti ivo vanopa akawanda mabasa, uye nekuburitswa nyowani nyowani vanowedzera zvimwe uye nekuwedzera. Nhasi, vhiki nhatu mushure previous version, asvika Vivaldi 4.3, uye imwe yezvinhu zvitsva izvo inounza ndeyekusiya zvimwe zvinhu zvavaive.
Google munguva pfupi yapfuura yakaunza iyo yekuzorora yekuona API iyo mapeji ewebhu anogona kushandisa kuziva kana isu takabatana neichi chishandiso kana yakatarwa Hardware, senge iyo keyboard kana mbeva. Zvakanaka, Vivaldi 4.3, iyo inoshandisa vhezheni yeChromium iyo yainge yaitwa, yakabvisa iyi API iyo yakatitorera kuvanzika.
Vivaldi 4.3 inosimbisa
Yakavandudza skrini yekushandisa. Iyo interface yakagadziridzwa nemifananidzo mitsva inotsanangudza zvirinani mashandiro anoita zvese uye basa rekudzora musarudzo rakawedzerwa.
Yakagadziriswa chikamu cheync uye interface.
Iyo yekumisikidza pani yakagadzirwazve.
Iyo idle nguva yekutsvaga API yakaremara nekutadza.
Tsigiro yekushandurudza mimwe mitauro makumi matanhatu neshanu, kuunza huwandu kusvika pamitauro 68 inotsigirwa nechishandiso chekushandura.
Kunatsiridzwa kwetsamba, khalendari uye RSS, zvichiratidza kuti zvinongedzo izvozvi zvinogona kukwezverwa kune iyo positi yekuumbiridza hwindo.
Tsigiro yeProgressive Web Apps, iyo inotibvumidza kuisa web-maapplication ayo anozoonekwa mune yedu yekushandisa menyu.
Zadza rondedzero yeshanduko kune iyo kusunungura chinyorwa.
Vivaldi 4.3 yave ichiwanika kwemaawa mashoma, saka inogona kutotorwa pasi kubva kune yayo webhusaiti. Vashandisi vemasystem senge Ubuntu, uko iyo repository inowedzerwa mushure mekuisa Vivaldi kekutanga, vatove nepakeji nyowani yakamirira mune software nzvimbo. Mamwe masisitimu anoshanda anosvika mumaawa mashoma anotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Vivaldi 4.3 inovandudza iyo yekubata chishandiso, iyo yekurodha pani uye neshanduro
Luciano Alonso nzvimbo yekuchengetedza mufananidzo akadaro
Cadê o global menyu kde plasma desktop?
Pindura kuna Luciano Alonso
vivaldi ndiyo yakanyanya kuvharwa-sosi bhurawuza yandinoziva, yakanyatso kurudzirwa